Hour Record စံချိန်ကုို ၅၄.၅၂၆ ကီလုိုမီတာနဲ့ Bradley Wiggins ချိုးလုိုက်ပြီ။ ~ Htet Aung Kyaw
Hour Record စံချိန်ကုို ၅၄.၅၂၆ ကီလုိုမီတာနဲ့ Bradley Wiggins ချိုးလုိုက်ပြီ။
2:35 PM Htet Aung Kyaw 1 comment
တမီနစ် တကီလုိုနီးပါး သုို့မဟုတ် တနာရီကုို ၅၅ ကီလုိုမီတာနဲ့စံချိန်တင်စီးပြ မယ်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့သူ Bradley Wiggins ဟာ ထင်ထားတာထက် အနည်းငယ်လျော့ပြီး ၅၄.၅၂၆ ကီလုိုနဲ့ Hour Record ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးလုိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ စံချိန်သစ်တင်ထားသူကတော့ Movistar အသင်းမှ Alex Dowsett ဖြစ်ပြီး တနာရီ ၅၂.၉ ၃၇ ကီလုိုမီတာရှိပါတယ်။ ဒီစံချိန်ကို တကီလုို ခွဲကျော်ကျော်အထိတင်ပြီး အခုလုိုချိုးလုိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
လန်ဒန်မြို့ Lee Valley VeloPark စက်ဘီးကွင်းမှာ ဒီနေ့ညနေ ၇ နာရီ (ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့) က Bradley Wiggins အခုလုိုစီးပြသွားတာပါ။
မီနစ် ၆၀ အတွင်း ဒယ်အုိုးကွင်းကုို ၂၁၈ ပတ်ကျော်ကျော်လေးစီးခဲ့ရပြီး တပတ်ကို ၂၅ စက္ကန့် ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ပုဝါမကူ ရေမရှုကြေးဆုိုသလုို တနာရီတာ အတွင်း ရေသောက်ဖုို့၊ ချွေးသုတ်ဖုို့အချိန်တောင်မရခဲ့ပါဘူး။
သူ အထူးစီမံထားတဲ့ ကာဘွန်ဘီးရဲ့ အချိုးဟာ 58x14 gear ratio (ရှေ့ဂီယာ ၅၈ စိတ်၊ နောက်ဂီယာ ၁၄ စိတ်၊ ဖရီးဘီးအသေ) ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၅၄.၆၁၀ နှုန်းလောက်နဲ့စီးပြသွားတာပါ။
ပထမ ပုိုင်း ၅ ပတ် (ကွင်း ၅ ပတ်) လောက်မှာ စံချိန်က ၅၃ ကီလုို ၀န်းကျင်သာရှိပေမဲ့ အပတ် ၃၀ လောက်ကစပြီး ၅၄. ကျော်ကျော်လေးအထိတက်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာကတည်းက စံချိန်သစ်ချိုးနုိုင်တော့မယ်ဆုိုတာကို ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကြုံးဝါးထားတဲ့အတုိုင်း တနာရီ ၅၅ ကီလုိုမီတာ အထိတော့မရလုိုက်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်ပါပဲ။ ဒီစံချိန်ကုို ၄-၅ နှစ်အတွင်း ထပ်ချိုးနုိုင်မဲ့ လူပေါ်လာ ဖုို့မလွယ်သေးဘူးလုို့ အကဲခတ်တွေကဆုိုပါတယ်။
၁၉၈၀ ဧပြီလ ၂၈ ရက်မှာမွေးတဲ့ (၃၆ နှစ်သား) ဗြိတိန်နုိုင်ငံသား Sir Bradley Marc Wiggins ဟာ road လမ်းပေါ်ပွဲနဲ့ track ကွင်းပွဲ ၂ ခုစလုံးရဲ့ ချန်ပီယံ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဟာ သူရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးနှစ်လုို့ပြောနုိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲ Tour de France သတင်း ၃ ပတ်ကြာပြိုင်ပွဲမှာ ပထမ ရခဲ့သလုို တခြား နာမည်ကြီး သတင်းတပတ်ကြာပွဲတွေဖြစ်တဲ့ Paris–Nice, the Tour de Romandie, the Critérium du Dauphiné နဲ့ လန်ဒန်အုိုလံပစ်ပွဲရဲ့ time trial ချန်ပီယံ ဆုတွေ ကို တနှစ်အတွင်း အားလုံးရယူနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တနှစ်အတွင်းမှာ ဒီလုိုပွဲအများ ကြီးကိုနုိုင်ဖူးသူ မရှိသေးပါ။
သူဟာ Team Sky အတွက် ပရုိုဖက်ရှင်နယ် ဘ၀တလျောက်လုံးနီးပါး စီးခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အထက်ဖေါ်ပြပါ ၂၀၁၂ ပွဲတွေအားလုံးကို Team Sky အမည်နဲ့ ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသက်က ၃၆ နှစ်ရှိလာပြီမုို့ ဒီနှစ်အစောပုိုင်းမှာတော့ Team Sky ကနေထွက်၊ ပရုိုဖက်ရှင်နယ်ဘ၀ကနေ အနားယူပြီး စက်ဘီးနဲ့ဆုိုင်တဲ့ စံချိန် စံညွန်းဆုိုင်ရာကိစ္စတွေကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲက တခုက တော့ ဒီနေ့ပြသလုိုက်တဲ့ Hour Record စံချိန်ကုို ၅၄.၅၂၆ ကီလုိုမီတာနဲ့ ချိုးလုိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ။
Source: Eurosport TV & Cyclingnews.com.
June 9, 2015 at 2:38 PM Reply
Bradley Wiggins ရဲ့ Hour Record စံချိန်တရားဝင်မှုမရှိဘူးလုို့ ဝေဖန်မှု ပေါ်ထွက်လာ။
တမီနစ် တကီလုိုနီးပါး သုို့မဟုတ် တနာရီကုို ၅၄.၅၂၆ ကီလုိုနဲ့ Hour Record ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးလုိုက်တဲ့ Bradley Wiggins ရဲ့စံချိန်ဟာ UCI ကမ္ဘာ့စက်ဘီး အဖွဲ့ချုပ်ကပြဌဏ်ထားတဲ့စည်းကမ်းနဲ့မညီဘူးလုို့ အရင်စံချိန်ဟောင်းပုိုင်ရှင် စက်ဘီးသမားရဲ့ နည်းပြကဝေဖန်လုိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂ ရက်နေ့ကမှ ၅၂.၉၃၇ ကီလုိုမီတာနဲ့ စံချိန်တင်ထားတဲ့ Movistar အသင်းမှ Alex Dowsett ရဲ့ နည်းပြ Steve Collins က BBC ရေဒီယုိုနဲ့မေးမြန်းခန်းတခုမှာ အခုလုိုဝေဖန်ုလုိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
''ခင်ဗျားစီးတဲ့ စက်ဘီးဟာ ဈေးထဲမှာ လူတုိုင်းဝယ်နုိုင်တဲ့စက်ဘီးဖြစ်ရမယ်၊ ဒီပွဲအတွက် သီးခြားပြင်ပြီး 3D ပရင့်တာနဲ့ထုတ်လာပြီးစီးလုို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ'' လုို့ သူက ခပ်ပြင်းပြင်း ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
UCI ရဲ့ ပုဒ်မ 1.3.007 အရ အထူးပြိုင်ပွဲတခုအတွက် အထူးစီစဉ်ထားတဲ့ ဘီးနဲ့ စီးခွင့်မရှိဘူး၊ ဒီပွဲမှာစီးတဲ့ဘီးဟာ ၉ လ အတွင်း ဈေးကွက်မှာ အများပြည်သူ ၀ယ်စီးနုိုင်တဲ့ဘီးဖြစ်ရမယ်လုို့ သူကထောက်ပြပါတယ်။
Bradley Wiggins တနင်္ဂနွေနေ့ (ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့) ကစီးသွားတဲ့ ဘီးကုို Pinarello and motor company က ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စက်ဘီးအားကစားဟာ အခြားအားကစားတွေနဲ့စာရင် နည်းပညာပေါ်မှာ အခြေခံရမှု ပုိုများတဲ့အတွက် နည်းပညာအကူအညီလုိုတာကလဲ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နည်းပညာနဲ့ လူသားစွမ်းရည်ကုို ဘယ်လုိုပုံစံနဲ့ ဟန်ချက်ညီအောင် အသုံးချမလဲဆုိုတာကတော့ ဆက်လက်ငြင်းခုန်နေရ ဦးမယ်ထင်ပါကြောင်း....။ ။